समाचार – Page 295 – Kaski News
पोखरा १७ चैत्र । नेवा: पत्रकार पुच कास्कीको प्रथम अधिवेशनले सञ्जय मल्लको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । समितिको उपाध्यक्षमा सन्देश श्रेष्ठ, महासचिवमा अनिशा श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा गणेशकुमार श्रेष्ठ र सचिवमा सुरज श्रेष्ठ चयन भएका छन् । त्यस्तै, सदस्यहरुमा दीपक के. श्रेष्ठ, सुरज श्रेष्ठ (फोटो पत्रकार), सुशीलकुमार श्रेष्ठ, कविता श्रेष्ठ, सोनी सुवाल तथा आमन्त्रित सदस्यमा अंशु शाक्य, निरज कायस्थ र […]
मिस कल्चर पश्चिमाञ्चल २०१७ मा १४ जना छनोट
पोखरा १७ चैत । पुष्पाञ्जली फेशन एण्ड इभेन्ट प्रा.लि.ले आयोजना गरेको प्रथम मिस कल्चर पश्चिमाञ्चल २०१७ मा विभिन्न राउण्डहरू पार गरि १४ जना प्रतिस्पर्धीहरू ट्यालेन्ट राउण्डमा प्रवेश गरेका छन् । ‘हाम्रो सँस्कृति हाम्रो पहिचान लोपउन्मुख संस्कृति जोगाउने हाम्रो अभियान’ भन्ने मूल उद्देश्यका साथ संचालन गरिएको उक्त कार्यक्रममा फागुन १५ गतेबाट सञ्चालनमा आएको हो । जसको मुख्य प्रायोजकमा गोर्खा ब्रअरी, सह–प्रायोजकमा […]
हुण्डाइ ग्राण्ड आइटेनको नयाँ मोडेल पोखरामा
पोखरा १७ चैत्र । नेपालको लागि हुण्डाइ गाडीको अधिकृत बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रा.लि.ले नयाँ मोडलको ग्राण्ड आइटेन गाडी सार्वजनिक गरेको छ । हुण्डाईकालागि गण्डकी धौलागिरीको आधिकारिक बिक्रेता एल.आई. मोटर्स प्रालि बुद्धचोक पोखरा सो रुमबाट एक कार्यक्रमका बीच बिहीबार ‘२०१७ ग्राण्ड आइटेन’ सार्वजनिक गरिएको हो । कम्पनीका अध्यक्ष गणेश बहादुर श्रेष्ठ तथा कार्यकारी निर्देशक सुनिल श्रेष्ठले उक्त गाडी सार्वजनिक गरेका हुन् […]
देशैभर मौसम बिग्रियो, पोखरामा नियमित उडानमा प्रभाव
झण्डै तीन सय यात्रु प्रभावित, यात्रुहरु टिकट रद्धै गरेर स्थल मार्ग रोज्दै विनोद लामिछाने/पोखरा । पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण देशकै मौसममा बद्ली हुँदा केहि दिन यता पोखराको मौसममा खराबी आएको छ । पोखराको वातावरण तुवाँल्लिएको छ । काहुँ, कृष्ति, सराँङकोट लगायत पोखरा नजिकैका डाँडाहरुपनि धमिलो देखिएको छ । झण्डै एक साता यता पोखरामा मेघ गर्जनसहितको वर्षात र असिना पनि वर्षिएको […]
बिग आइकनको फिनालेमा उठेको रकम ‘बालश्रम न्यूनिकरण कार्यक्रम’लाई
पोखरा, १६ चैत । सातौँ सँस्करणको बिग आइकनको ग्राण्ड फिनाले अन्तरगत उठेको सम्पूर्ण रकम पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ मातहत रहेर संचालनमा आएको बालश्रम न्यूनिकरण कार्यक्रमलाई जाने भएको छ । बिग आइकनको आयोजक संस्था बिग एफएमले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत सो रकम बालश्रम न्यूनिकरण कार्यक्रमलाई हस्तान्तरण गर्ने जनाएको हो । करिब दुई महिनायता संचालनमा आएका बिग आइकनको सातौँ सँस्करणको ग्राण्ड फिनाले कार्यक्रम […]